तिथि मेरो पत्रु »5रचनात्मक तरिका म तपाईं प्रेम भन्न
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 01 2020 |2मिनेट पढ्न
“म तिमीलाई माया गर्छु”, रूपमा शुद्ध र यो एक को रूप मा अर्थपूर्ण छ भनेर केही अन्य वाक्य छन्. यी तीन शब्द आफ्नो प्रिय को मूड हल्का अक्सर पर्याप्त छन्; तथापि, तपाईं भन्न केही रचनात्मक तरिका अपनाउने भने “म तिमीलाई माया गर्छु”, उनको अनुहार मा हास्नु पक्कै पनि व्यापक हुनेछ.
तीन ईश्वरीय दुखेसो पोखिरहेका यी पाँच रचनात्मक तरिका मा एक नजर छ; तपाईं पक्कै केही बाहिर प्रयास प्रेम गर्नुहुनेछ, यदि सबै.
1. एक उपहार संग भन्न: तपाईं यो म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्न सबैभन्दा व्यापक प्रयुक्त बाटो शायद सबैभन्दा पुरानो छ र यो तरिकाबाट रचनात्मक कसरी छ भन्ने सोच हुनुपर्छ. तपाईं कुनै पनि उपहार टिप्न गर्न सल्लाह दिए छैनन् किनकी यो विचार फरक छ, यो संलग्न सम्झनाले छ कि उपहार आफ्नो प्रिय कुरा.
यो तपाईं को दुई सँगै बिताएको ठूलो क्षण प्रदर्शन फोटो को एक महाविद्यालय हुन सक्छ, सँगै बाँच्ने सुरु गर्दा वा तपाईं किनेको कफी मग को पहिलो जोडी हुन सक्छ (तपाईं तिनीहरूलाई केही राम्रो कुरा लेखेर यो एक बिट पक्का व्यक्तिगत बनाउन; तपाईं एक मात्र लेखन मा पनि राम्रो छैन भने “म तिमीलाई माया गर्छु” के हुनेछ.
उपहार पक्कै भावनात्मक आफ्नो साथी बनाउन गर्नेछ र म तिमीलाई प्रेम भन्न सही छिन.
2. तपाईं उनको लागि बनाउन सक्छ: हृदय आकारको कुकीहरू को संयोजन र शब्द संग caffÃ¨ कहवा एक कप “म तिमीलाई माया गर्छु” ठूलो काम थियो चकलेट प्रयोग लेखिएको.
उनको हात पकड, म तिमीलाई माया गर्छु भन्न, र उनको caffÃ¨ कहवा को एक सिप प्रदान. वर्ष आउन लागि उल्टै क्षण सम्झना हुनेछ.
3. स्टिकिनोटहरूका प्रयोग: तपाईं आफ्नो प्रिय गरेको बिहान तीन हृदयस्पर्शी सुनेर सुरु गर्न चाहनुहुन्छ? बस रातो वा गुलाबी स्टिकिनोटहरूका प्रयोग बाथरूम दर्पण मा एक हृदय आकारको महाविद्यालय बनाउन र म यो मा तपाईं प्रेम लेख्न.
यसो गरेर तपाईं आफ्नै अनुहार नदेखे सुनिश्चित गर्न सक्षम हुनेछु, आफ्नो श्रीमती वा साथी सुन्दर शब्दहरू देख्नुहुन्छ; त्यसपछि पछि देखि न्यानो अँगालो यसलाई पालन र शब्दहरू गनगन “म तिमीलाई माया” उनको कान मा.
4. आफ्नो काम को लागि तयार मदत: आफ्नो श्रीमती वा पार्टनर अगाडी एक व्यस्त दिन छ विशेष भने यो म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर एक ठूलो तरिका हुनेछ.
उनको लुगा फलाम, लागि एक सरल नास्ता तयार उनको, तयार उनको कार्यालय झोला प्राप्त गर्न उसलाई मदत र म त्यो काम लागि छोडेर गर्नुअघि तपाईं प्रेम भन्न.
तपाईं समय छ भने, तपाईं पनि आफ्नो कार्यस्थल तिर बढ अघि कार्यालयमा उसलाई छोड गर्न सक्छन्.
5. कीर्तिमान: यो जुनसुकै तपाईं पहिलो पटक वा nth समय लागि यो भनिरहेका छन् कि प्रेम सन्देश Conveying को एक ठूलो तरिका हो. यो एक भिडियो रेकर्डिङ वा यो प्रेम गर्नुहुनेछ आफ्नो प्रिय रेकर्ड एउटा अडियो हुन सक्छ.
तपाईंको आँखा सधैं यसो हुनु पर्छ “म तिमीलाई माया गर्छु” तपाईं प्रेम व्यक्ति, तर समय समयमा यो बोले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ; तीन स्वर्गीय शब्दहरू भन्दै को माथि तरिकामा बाहिर प्रयास गरेर, तपाईं मात्र तपाईं दुई पनि बलियो बन्धन बनाउन हुनेछ.
अनलाइन डेटिङ तल तपाईं रही?